Moe Kai: January 2013
အခုတော့ ပျင်းပျင်းနဲ. စာမရေးနိုင်သေးတော့ ဒီတပတ် အင်္ဂလန်မှာ ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂလန်က လူတွေ ကားတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်သွားတဲ့ အလွန်လဲ စိတ်ညစ်ဖို.ကောင်းသလို၊ အလွန် ချစ်ဖို.လဲကောင်းတဲ့ နှင်းထဲက ဓါတ်ပုံလေးတွေပဲ ရှဲပါတော့မယ် ....
အိမ်နောက်ခြံထဲက စားပွဲနဲ. ကုလားထိုင်
နောက်နေ. နှင်းတွေ ပိုထူလာတာလေ ..
ကျမဘဝရဲ. ပထမဆုံးလုပ်ဖူးတဲ့ Snowman လေး ပါ။
Mr Snowman က သူ.အပေါ်တညလုံး နှင်းတွေထပ်ကျတော့ စိတ်ညစ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့
taxi သမားကြီး သူ.ကား နှင်းတွေ ထဲ ချော်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေပုံ ..
မနက်ခင်း စောစော ကျမရဲ့. ကားလေးခင်ဗျာ
ရှင်းပေဦးတော့ နှင်းတွေကို ....
ယောကျာ်းက ကင်မရာတလုံးနဲ. အလုပ်ရှုပ်နေတယ်